साउदी अरबमा बृहत् भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न - Pahilo News
साउदी अरबमा बृहत् भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न
२७ असार । मुस्लिम समुदायको महान् पर्व इद अल फितरको उपलक्ष्यमा साउदी अरबको राजधानी रियादमा रियाद लांघाली स्पोर्ट ग्रुपले साउदी अरब स्तरीय अन्तर नेपाली खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ ।
गत जुलाई ५ मा सुरु भएर दुई दिनसम्म चलेको उक्त भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाली राजदुताबास, रियादका कार्यबाहक राजदुत आनन्दप्रसाद शर्माले गरेका थिए । रियाद लांघाली स्पोर्ट ग्रुपका अध्यक्ष दीपक रेग्मीको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिन टाढा–टाढाबाट खेलाडी र दर्शक आएका थिए ।
आयोजकका अनुसार, उक्त प्रतियोगितमा करिब पाँच हजार जनाको सहभागिता थियो । रियादस्थित नेपाली दूताबासमा कार्यरत अधिकारीहरुले पनि कार्यक्रमलाई सहयोग गुरेका थिए ।
उक्त खेलमा ४४ वटा टिमको सहभागिता थियो । साउदी अरबमा रहेका बिभिन्न नेपाली संघ संस्था र समुदायहरुको आयोजनामा प्रायः भलिबल प्रतियोगिता भइरहन्छ । तर, यो प्रतियोगिता भने आजसम्मको खेल इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो भलिबल प्रतियोगिता रहेको आयोजकहरुले दावी गरेका छन् । साउदी अरबमा नेपालीहरुले आयोजना गरेको भलिबल प्रतियोगितमा एकै पटक यति धेरै दर्शकहरुको उपस्थिति र यति धेरै टिमको सहभागिता रहेको पाइँदैन ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेल निकै नै रोमान्चकारी भएको थियो भने खेलको अन्तिमसम्म पनि दर्शकहरु भोक, प्यास, निन्द्रा, घाम केही नभनी एकदमै उमङ्गका साथ हुटिङ गर्दै थिए । खेलाडीहरु उत्साह र जोशका साथ भिडिरहेका देखिन्थे ।
भलिबल प्रतियोगिताको प्रथम उपाधिी हात पार्न दम्माम स्पोर्टस क्लब सफल भएको छ भने दोस्रो उपाधि मेची–महाकाली टिमले हात पारेको छ । तेस्रो पश्चिमान्चल टिमको हातमा पुगेको छ । आयोजक रियाद लांघाली स्पोर्ट ग्रुपले प्रथम हुने टिमलाई रु. ८७, हजार, कप , मेडल र प्रमाणपत्र, दोस्रो हुने रु ५८ हजार, कप, मेडल र प्रमाणपत्र र तेस्रो हुनेलाई रु. २९ हजार, कप, मेडल र प्रमाणपत्र पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।